Vahaolana amin'ny fanadiovana elektrôlôjika tsara ho an'ny mari-pahaizana China Manufacturer
Description:Fanadiovana elektrika tsara,Fanadiovana solika fanadiovana ho an'ny Electronic,Fitaovana fanadiovana tsara ho an'ny Precision Electronic
Home > Products > Hydrofluoroether Clean Agent > Famerenana ny Solosaina ho an&#39;ny Precision Elektronika > Vahaolana amin&#39;ny fanadiovana elektrôlôjika tsara ho an&#39;ny mari-pahaizana
Vahaolana amin'ny fanadiovana elektrôlôjika tsara ho an'ny mari-pahaizana
1.HFE Extremely ambany ambonin'ny fihenjanana sy ny viscosity, Mety tsara niely avy ka hiparitaka any ho etỳ ambonin'ny ny fototra ara-nofo sy ny masonkoditra isan-karazany, ary misy vokany eo amin'ny scour tsara, wetting, solvation sy ny fanadiovana;
2 .. Hfe Corrless Cleaning Solution tsara fanalefahana herinaratra, ary afaka manadio amin'ny trangan-jiro, ary afaka manatsara ny toerana mety;
3. Manadio rano Tena tondra-drano (54 ℃), ary azo ampiharina tsara amin'ny fitaovana fanadiovana isan-karazany, ary afaka milalao anjara amin'ny fikirakirana koa mandritra ny fandroana sy fanadiovana. Ny vahaolana amin'ny alàlan'ny ordinatera elektronika dia tsy mampidi-doza zavatra , tsy mirehitra ary tsy misy pesta, tsy misy afo na teboka teboka;
4. Ny vahaolana amin'ny fikojakojana dia ny fihenan-tsakafo, ny tsy fahampian-tsakafo tsy misy miala, ary afaka mitana andraikitra tsara amin'ny fitsaboana ny fidiovana;
Famerenana ny vahaolana amin'ny fikolokoloana:
Ity Hfe Inert Cleaning Agent ity dia fitambaran'ny Hydrofluoroether. Ny vokatra azo avy amin'ny tontolo iainana izany, izay sady tsy misy loko no sady tsy misy poizina ary tsy mampidi-doza , ary mitoka-monina. Azo ampiasaina betsaka amin'ny fanadiovana ny fitaovana fototra izy io, toy ny fanadiovana ny mari-pahaizana elektronika, ny PCB, ny fitaovana elektronika, ny fizarana mazava tsara, ny fanadiovana ny loko / lantihy samihafa, ny semiconductor, ny LCD ary sarotra disk etc., ary azo ampiasaina koa mba handotoana ary fanadiovana , fanandramana fitetezana elektronika na fitiliana fohy, ary solvent.
Fanadiovana elektrika tsara Fanadiovana solika fanadiovana ho an'ny Electronic Fitaovana fanadiovana tsara ho an'ny Precision Electronic